Rooble oo Xalane kula kulmaya Madaxda Maamullada | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo Xalane kula kulmaya Madaxda Maamullada
Rooble ayaa isku dayaya inuu ku qanciyo Axmed Madoobe iyo Deni inay ka qeybgalaan Shirka Afisyooni.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa saacadaha soo aadan la filayaa inuu kulan la yeesho hogaamiyaasha Maamul Goboleedyada, ee ku sugan xarunta Xalane.
Waxay noqonaysaa markii ugu horeysay tan iyo markii shirarka kala duwan ee Madaxda Maamulalda ay todobaadkii hore ka bilowdeen magaalada Muqdisho, gaar ahaan Afisyooni iyo Airport hotel.
Sida ay sheegayaan ilo wareedyo, Rooble wuxuu kula kulmi doonaa hogaamiyaasha Airport hotel si uu ugala hadlo arrimaha muranka dhaliyay ee dib u dhigay doorashada Soomaaliya.
Wadahadallada ayaa imaanaya iyadoo Beesha Caalamka ay ku cadaadineyso Madaxda siyaasadda Soomaaliya inay isu yimaadaan si loo soo afjaro khilaafaadka caqabada ku noqday qabashadda doorasho loo dhan yahay, oo xor iyo xalaal ah.
Hogaamiyaasha dowlad gobaleedyada oo kulamo illaa afar jeer yeeshay, ayaa lagu soo waramayaa in ay isku raaceen in dib loo bilaabo wadahadaladii ay kula jireen Farmaajo oo dhowr jeer oo hore lagu guuldareystay inay qabsoomaan, kadib markii Deni iyo Axmed Madoobe ay Farmaajo hordhigeen shuruudo dhowr ah.
Dhanka kale, Wakiilada Beesha Caalamiga ah ayaa maanta wadahadalada kula qaatay Maanta Madaxda Maamullada shanta ah Airport Hotel kahor kulanka Rooble.
Fadhigii Gollaha Shacabka ee maanta loo balansanaa ayaa la joojiyay kadib markii sida la sheegay ay Beesha Caalamku ku cadaadisay Mursal oo xalay Taleefoonka kula soo hadleen inuu dib u dhigo illaa Arbacada.
Sabtidii, Mursal wuxuu shaqada ka joojiyay 15 mudane oo Gollaha katirsan kadib markii lagu eedeeyay ku xadgudubka xeer hoosaadka joogtada ah iyo sharciga Baarlamaanka.